घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार » इक्वेडर ब्रेकिंग न्यूज » के नयाँ मन्त्री इक्वेडरलाई पर्यटन शक्ति बनाउन सक्छन्?
ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • व्यापार यात्रा • इक्वेडर ब्रेकिंग न्यूज • सरकारी समाचार • समाचार • पुनर्निर्माण • पर्यटन • पर्यटन कुराकानी • यात्रा गन्तव्य अपडेट • यात्रा रहस्य • अहिले प्रचलनमा • विभिन्न समाचार
सान्द्रा नारन्जो जुलाई १, २०२१ देखि इक्वेडरका लागि पर्यटन मन्त्रीको रूपमा नयाँ नामित भएका छन्।
इक्वेडर नयाँ पर्यटन मन्त्रीको घोषणाको पर्खाइमा छन्।
इक्वेडर मा पर्यटन विकास को एक आर्थिक साधन हुनेछ।
के देश COVID को एक वर्ष देखि बाहिर तान्न सक्षम हुनेछ?
इक्वेडरको नयाँ पर्यटन मन्त्रीको बारेमा छिट्टै घोषणा हुने आशा गरिएको छ।
को लागी रहनुहोस् eturbonews.com।